လူဇင်ဘတ် Holding ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အခွန်အကျိုးကျေးဇူးများ
လူဇင်ဘတ် Holding ကုမ္ပဏီ
လူဇင်ဘတ်မြောက်ပိုင်းဥရောပတိုက်တွင်တည်ရှိသည်။ ယင်း၏အရာရှိတဦးကအမည်အား "လူဇင်ဘတ်၏ The Grand Duchy" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူဇင်ဘတ်ကောင်းစွာယင်း၏စပျစ်ရည်ကိုစားသုံးမှုများအတွက်လူသိများသည်။ ယင်း၏တွေကလည်းလျော့ရဲရဲအခွန်ကောက်ခံမှုနှင့်ဘဏ်များတွင်လျှို့ဝှက်ဘဏ်အကောင့်များအဘို့အကျော်ကြား, လူဇင်ဘတ်လည်းညားသောတောင်ထိပ်ထိပ်ပေါ်နှင့်ကမ်းပါးရဲ့အစွန်းပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ယင်း၏ယူနက်စကိုအမွေအနှစ် designated သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦများအတွက်ကောင်းစွာသိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် setting များကိုတူသောနတ်သမီးပုံပြင်နှင့်အတူ၎င်း၏တောင်တန်းအနေအထားတလျှောက်ဖြန်းကြပါတယ်။ ၎င်း၏ Moselle စပျစ်ရည်ကိုတိုင်းပြည်Müllerthal၎င်း၏လှပသော Micro-ဉျတလျှောက်အံ့မခန်းလမ်းကြောင်းနှင့်အတူကမ္ဘာကျော်ဖြစ်ပါတယ်။
လူဇင်ဘတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီများနည်းပါးလာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်နှင့်အတူကော်ပိုရေးရှင်းအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဆိုပါလူဇင်ဘတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်မည်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများမှအုပ်ချုပ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ, မခွဲခြားဘဲသူတို့ကကမ္ဘာကြီးကိုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားတှငျနထေိုငျသညျ့နရောဒ, လူဇင်ဘတ်တစ်ဦးကိုင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရန်လိမ့်မည်။
• တချို့ကအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ်ကျင်းပခြင်းကုမ္ပဏီအများဆုံးကိစ္စများတွင်မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်, အသားတင်ရကျိုးနပ်အခွန်နှင့်အခွန်ရှောင်အခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သူတို့ဝင်ငွေအခွန်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
• လွယ်ကူသောမှတ်ပုံတင်ခြင်း: တစ်လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်အတော်လေးထိရောက်လွယ်ကူသည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: အဆိုပါကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, နေထိုင်သူသို့မဟုတ် Non-နေထိုင်သူဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်သူတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများအားဖြင့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ်ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီရှယ်ယာရှင်များနှင့်ဒါရိုက်တာများနှစ်ဦးစလုံးမှသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်လျှို့ဝှက်ပေးထားပါတယ်။
လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများသည်မဆိုပြီးသားရှိပြီးသားကုမ္ပဏီတွေဟာဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်ကိုကိုလည်းကြောင်းကုမ္ပဏီ၏အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားသတ်မှတ်ပေးရန်အတိုကောက် "AG က" သို့မဟုတ် "လုပ် SA" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။ ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့်ကုမ္ပဏီဆင်တူမဖွစျနိုငျ အစုစပ်ပါဝင်သူ'' s ကိုအမည်ဖြစ်တယ်။
လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများသည်လုပ်ငန်းစဉ်အား server ကို request များနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိနိုင်ရန်အတွက်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးနှင့်ဒေသခံမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ရှိရမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအဓိကလိပ်စာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုယျခန်ဓာ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအလောင်း (စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့) သုံးနိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နှစ်ခုအလောင်းတွေကိုအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပါကကုမ္ပဏီရုပ်ပွားတော်၌ဤဖော်ပြရပါမည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်တဦးတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီး အကယ်. (ဈ), ထို့နောက်သူကတစ်ခုတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးကစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုအလောင်းတွေရှိပါက (ii), တစ်ခုတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးနေဆဲနေသမျှကာလပတ်လုံးကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာမြို့တော် 500,000 ယူရိုထက်လျော့နည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုထက် ပို. ရှယ်ယာရှင်ရှိပါတယ်လျှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကဘုတ်အဖွဲ့သို့သျော, လိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကအနည်းဆုံးသုံးအဖွဲ့ဝင်တက်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်, ဤအဖွဲ့ဝင်များလည်းရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုပျဉ်ပြားရှိပါတယ်လျှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းဘုတ်အဖွဲ့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကလျှင်ဒါရိုက်တာများနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးတွင်ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်များသည့်အချိန်တွင်မဆိုဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။
တစ်လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများအတွက်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် EUR 30,000 သို့မဟုတ်အခြား Non-ယူရိုငွေကြေးအတွက်ညီမျှသည်။ paid နိမ့်ဆုံးစုစုပေါင်းရှယ်ယာမြို့တော်တန်ဖိုး 25% ရှိရပါမည်။
လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများမှ 21% ဖြစ်သော (လည်း cit အဖြစ်လူသိများ) မှာကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန်နှုန်းပေးဆောင်ရပါမည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီများသည်အစိုးရ၏အလုပ်လက်မဲ့ရန်ပုံငွေသို့ 4% ပေးဆောင်ရပါမည်။ ဤသည်စုစုပေါင်း cit များသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီများသည် 21.84% ကုန်ကျသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ cit အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေမှလျှောက်ထားသည်။
ဝေမျှမယ်ပံ့ပိုးမှုများကိုတစ် 0.6% မှတ်ပုံတင်ရေးတာဝန်နှင့်တစ်ဦး 0.5% ကူးယူအခွန်စွဲချက်တင်နေကြသည်။
သည်အခြားကုမ္ပဏီပံ့ပိုးမှုများကိုတစ် 6% မှတ်ပုံတင်ရေးတာဝန်နှင့်တစ်ဦး 1% ကူးယူအခွန် (လူဇင်ဘတ်မြို့အဘို့ 4%) ဖြင့်တရားစွဲဆိုထားပါသည်။
လူဇင်ဘတ်တစ်ဦးကိုင်ထားကုမ္ပဏီအတွက်လိုအပ်သောနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး 6.400 CHF ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးဦးပိုင်ကုမ္ပဏီစီးပွားဖြစ်ထုံးစံ၌ကုန်သွယ်မှုကိုလိုက်ရှာသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဒီပေးလျှင်, ကုမ္ပဏီအများပြည်သူစံချိန်သို့ဝငျပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကုမ္ပဏီများသည်အများပြည်သူစံချိန်သို့ ဝင်. မည်မဟုတ်ပါ။
စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်များကိုသည့်လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်သည်။ ကုမ္ပဏီသေးငယ်သည်ဆိုပါက, တကပြဌာန်းစာရင်းစစ်ရှိရမည်။ ကြီးမားသည့်ကုမ္ပဏီများမှအလတ်စားလွတ်လပ်တဲ့စာရင်းစစ်ရှိရမည်။
သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုပြဌာန်းစာရင်းစစ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပုဂ္ဂလိကပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများနိုင်ပါတယ်, နှင့်စာရင်းစစ် (s) သို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ပြင်ဤစာရင်းစစ်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်, နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မပယ်ချနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါလွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်လူဇင်ဘတ်ရှိအ Institut des Réviseurs d'Entreprises သည်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါအသားတင်ဝင်ငွေ: EUR 6.25 သန်းထက်ကျော်လွန်
စုစုပေါင်းလက်ကျန်ရှင်းတမ်း: EUR 3.125 သန်းထက်ကျော်လွန်
န်ထမ်းများ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်: 50 ထက်ကျော်လွန်
လူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများမှနှစ်စဉ်အခွန် file ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်အလက်အတူ, သူတို့ကလည်းအောက်ပါကွိုတငျပွငျဆငျရမည်ဖြစ်သည်:
မဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်အမည်ရှိမဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာလိုအပ်ရှယ်ယာရှင်များနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အတူအချို့သောအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်, လွယ်ကူသောမှတ်ပုံတင်ရေး: တစ်ဦးကလူဇင်ဘတ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီအပါအဝင်အနည်းငယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။